Filtrer les éléments par date : vendredi, 29 octobre 2021
vendredi, 29 octobre 2021 19:46
Paositra Malagasy : Nanome voninahitra ireo harena ara-boajanahary Malagasy
Notanterahina ny Alakamisy 28 oktobra tao amn’ny Hôtel Carlton Anosy ny lanonana famoahana ireo hajia vaovao miisa enina, sy vokatra filatelika izay nokarakarain’ny Paositra Malagasy.
Nanamarika ny lanonana ny fanomezan-boninahitra manokana nataon’ny Paositra Malagasy an’i Profesora
Jonah Ratsimbazafy nanokana ny fiainany amin’ny fiarovana ny Varika sy ny toerana ara-boajanahary misy azy ireo.
Izy dia Mpitondrateny sy mpiaro ireo biby ireo ka efa 30 taona no nikelezan'ny Profesora aina tamin’ny fiarovana ireo karazana biby tsy fahita raha tsy eto an-toerana ireo.
Marihina fa i Profesora Ratsimbazafy Henri Jonah, manam-pahaizana manokana momba ny Varika, dia noraiketina anaty hajian’ny Paositra Malagasy.
Nanomboka ny taona 2015, ary isan-taona, ny Paositra Malagasy dia mamoaka hajia vaovao ahitana ireo olona nanan-danja indrindra eran-tany.
vendredi, 29 octobre 2021 19:45
IST Antsiranana : Mitaky fitovian-jo ny mpampianatra
Mbola mihidy ny IST Antsiranana noho ny fitokonana.
Misy 72 eo ireo mpampianatra amin'ny IST (Institut Supérieur de Technologie) telo (Antsiranana - Ambositra - Antananarivo) no tsy nahazo intsony ny tambinkarama maha-mpampiantra azy ireo hatramin'ny volana Janoary 2021.
Takian'izy ireo ny fitoviana zo amin'ny samy mpampianatra ao amin'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony.
Nandefa taratasy manambara ny firaisakinany amin'ny Mpampianatra, ireo mpianatra ao amin'ny IST Antsiranana, ary mitaky ny hamahana faran'izay haigana ny olan'ny Mpampianatra, dia ny handoavana ny "Vacations", "Heures complémentaires" ary ny fampitovian-jo ny samy Mpampianatra.
Efa betsaka ireo mpianatra nahaloa ny saram-pianarana ary maniry ny hiverenan'ny fampianarana faran'izay haigana.
vendredi, 29 octobre 2021 12:42
Famatsian-drano : Politika ho an'ny "madinika" hoe ?
Lasa fomba fiteny ity ho an'ny "madinika" ity, nefa rehefa tena zohiana raha ny famatsian-drano no jerena dia lainga sy fitaka avokoa no nolazain'ny mpitondra nifandimby.
Porofon'izany ny vidin-drano amin'ny bidon mavo 20litatra dia 100ar ny kely indrindra, ankoatran'ny saran'ny mpitatitra, ny filaharana mandritra ny 2ora, ny fifohazana amin'ny 2maraina.
Nefa ny rano ho an'ny mpanjifa ny rano jirama, taritina any an-trano, tsy milahatra, tsy mifoha maraina, manodina robinet dia mahazo, 500ar latsaka ny 1m3 na 1000litatra (415ar/m3 1ère tranche latsaky ny 10m3).
Izany hoe ny "madinika" mandoa avo 10 heny amin'ireo manan-drano an-trano.
Mila fitondrana tsy mitanila sy milaza ny marina ny firenena fa tsy ny "madinika" no atao fihalofana sy fakana vato rehefa fifidianana, nefa dia tsipazana tee-shirt sy kaly tsinjo dia mihesona.
Fitsarana miaramila : Tanora miisa 401 270 no niatrika izany ho an’ny taona 2021
Tontosa soamantsara ny fitsarana miaramila taona 2021. Tanora miisa 401 270 no niatrika izany ka 231 854 no lahy raha 169 416 no vavy.
Manentana sahady ireo izay tsy mbola nahavita, hiatrika izany amin'ny taona ho avy ny ministeran’ny fiarovam-pirenena.
vendredi, 29 octobre 2021 09:15
Analakininina Toamasina : Trano 15 tafo ravan’ny afo, 90 ireo traboina
Nitrangana haintrano tao Analakininina Hopitalibe parcelle 12_21-22 Toamasina ny alakamisy 28 oktobra 2021. Afo tsy voafehy niainga tao an-dakozian’ny tokantrano iray no niitatra, tokony ho tamin’ny 11ora sy sasany.
Nifarimbona tamin'ny famonoana ny afo ny mpamonjy voina an’ny Kaominina Toamasina sy ny Seranan-tsambo (SPAT) ary ireo miaramila ao amin'ny ZDS Pangalana, nampian'ireo fokonolona manodidina.
Naharitra ora iray teo vao voafehy ary maty tanteraka ny afo.
Trano 15 no may, tsy nisy aina nafoy fa manodidina ny 90 atreto ireo olona traboina vokatry ny fahamaizana.
Nametraka ny vahaolana vonjimaika hanampiana ireo traboina ny olom-boafidy sy ny tompon'andraikitra miaramila ao an-toerana.
vendredi, 29 octobre 2021 09:09
Ady amin’ny Covid : Tonga ny vaksiny Sinopharm 468 000 fatra
Noraisina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny alakamisy 28 oktobra 2021 ny vakisiny Sinopharm 468 000 fatra avy amin'ny Mécanisme Covax.
vendredi, 29 octobre 2021 09:03
Fikojakojana ny lalana : Naato avokoa ny asa
Namoaka naoty ny Fonds Routier ny 27 Oktobra 2021 manome toromarika fa miato avokoa ny asa fikojakojana lalana rehetra miankina amin’ny famatsiam-bolan’ny Fonds Routier.